ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်တွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြည့်ရှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၊ အသစ်ဖော် အသစ်တွေ အပေါ် မှတ်ချက်ပေး စကားနဲ့ သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဗန်ဒီ ဘိခ် - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်တွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြည့်ရှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၊ အသစ်ဖော် အသစ်တွေ အပေါ် မှတ်ချက်ပေး စကားနဲ့ သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဗန်ဒီ ဘိခ်
September 16, 2020 - by Editor
ဒွန်နီ ဗန်ဒီ ဘိခ် ဆိုတာ ဒီနွေ အပြောင်းအရွှေ့ အတွင်း အေဂျက်ဇ် အသင်း မှ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီကို ပေါင် သန်း 40 နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစား သမား တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ ဒီနွေမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခု တစ်ပါတ် မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ 2020 – 21 ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ ပထမဆုံး ပွဲစဉ် အဖြစ် ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားရပါ တော့မယ် ။ ဒီပွဲ မှာတော့ ဗန်ဒီ ဘိခ်ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ပွဲထွက် ကစားပေး နိုင်ခြေ များပြား နေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီကြားထဲ မှာတော့ ဗန်ဒီ ဘိခ်ဟာ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ရာသီ အကြို ပွဲစဉ်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပွဲထွက် ကစားခွင့် ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ပြီး ပုံစံကောင်း ပြသ နိုင်ခဲ့ပါ သေးတယ် ။ အခုတော့ သူဟာ ပုံစံကောင်း တွေကို ဆက်လက် ပြသဖို့ မျှော်လင့် နေပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ တစ်နိုင်ငံ တည်းသား ဖြစ်သူ ဗန်ဒါဆား ၊ ဗန်ပါစီ ၊ ဒါလေ ဘလိုင်း ……… တို့ ကစားခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ် တွေကို ငယ်စဉ် ကတည်းက အားပေး ကြည့်ရှု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗန်ဒီ ဘိခ်က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် ငယ်စဉ်တုန်းက ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေ အများကြီး ကြည့်ရှု ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒတ်ချ် ကစားသမား အများစုက ဒီမှာ ကစားခဲ့ ကြလို့ ပါပဲ ။ အသက် ငယ်ရွယ် သေးတဲ့ ကလေး တစ်ဦး အတွက် တစ်နိုင်ငံတည်းသား တွေ ပါဝင်တဲ့ ပွဲကို ကြည့်ရှု ရတာ ပျော်စရာ ကောင်းတယ်လေ ”
” ဒါလေ ၊ အက်ဒ်ဝင် ၊ ရော်ဘင် ဗန်ပါစီ … ကျွန်တော် သူတို့ တွေကို စောင့်ကြည့် ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ သူတို့ တွေဟာ ဆုဖလား များစွာ ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ ကြပြီး အသင်းရဲ့ ကစားပုံတွေလည်း ကောင်းမွန်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့တာ တွေကို စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ပဲ ကောင်းမွန်လှ ပါတယ် ” လို့ ဗန်ဒီ ဘိခ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဗန်ဒါဆားဟာ 2005 နဲ့ 2011 ခုနှစ် အတွင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နံပါတ် 1 ဂိုးသမား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်4ကြိမ် ၊ ချန်ပီယံလိဂ် 1 ကြိမ် တို့ကို ရယူ ဆွတ်ခူး စေရေး မှာ အဓိက ပါဝင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဗန်ပါစီ ကတော့ ယူနိုက်တက် တို့ အကြိမ် 20 မြောက် အမှတ်ပေး ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ရေး မှာ အရေးပါသူ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါလေ ဘလိုင်း ကတော့ လူးဝစ် ဗန်ဂါးလ် ရဲ့ လက်ထက် တုန်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ရောက်ရှိ လာခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး ဆု ဖလား အချို့ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အမှတ်ပေး ဖလား နဲ့ ဝေးကွာ ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အခုတော့ သူဟာ အေဂျက် အသင်းမှာ ပါဝင် ကစား နေခဲ့ ရသူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဗန်ဒီ ဘိခ်က အသင်းဖော် အသစ် တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ …
” ဒီလို ကစားသမား တွေနဲ့ နေစဉ် ကစား ရတာ ကောင်းမွန်လှ ပါတယ် ။ ခင်ဗျားဟာ နေ့စဉ် လေ့လာ သင်ယူမှု တွေကို လုပ်ဆောင် နိုင်မယ်လေ ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေး ကိုယ်စီ ရှိနေပြီး သူတို့ ဆီက အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အရာတွေ ခင်ဗျားတို့ အတုယူသင့် ပါတယ် ။ သူတို့နဲ့ အတူ ကစား ရတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင် ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် တို့ဟာ အသင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဖန်တီး နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် နေပါတယ် ။ ဒီအသင်းမှာ လူငယ် ကစားသမားတွေ ၊ ကျွန်တော် နဲ့ သက်တူရွယ်တူ ကစားသမား တွေ အများကြီး ရှိနေကြ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းကို ကူညီနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် ” လို့ ဗန်ဒီ ဘိခ်က ပြောရင်း အသင်းဖော် တွေကို ကွင်းထဲ မြင်တွေ့ လိုကြောင်း ပြောခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ်က အံ့ဖွယ် ကွင်းကြီး တစ်ခု ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေ ရှိနေ ကြမယ် ဆိုမှ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူတို့ အရှေ့မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ပွဲထွက် ကစား နိုင်ဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ ပါဘူး ။ ကျွန်တော် သူတို့ကို ကွင်းထဲ အမြန်ဆုံး တွေ့နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက် ထားရှိ နေပါတယ် ”
” ပရိသတ်တွေ ဆိုတာ ကွင်းထဲ ရှိနေတဲ့ အချိန်ကျရင် ကျွန်တော်တို့ တွေကို ခွန်အားတွေ အများကြီး ပေးစွမ်း နိုင်သူတွေ ပါပဲ ။ ဒါဟာ မိသားစု ဆန်တဲ့ အသင်းပါ ။ ဒါကို ဒီ အသင်း ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး စက္ကန့် ထဲက ကျွန်တော် သိရှိ ခံစား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ” လို့ ဗန်ဒီ ဘိခ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဝေဖန်သူတွေကို ဟက်ထရစ် နဲ့ အသံတိတ်စေခဲ့ပြီးနောက် ရှေ့လျှောက် ပစ်မှတ် တရပ် ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ #ဟာဗက်ဇ်
ပြိုင်ဘက်ကောင်း လက်စတာ ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အာဆင်နယ် တို့ နောက်တစ်ဆင့် တက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ခြေစွမ်းပြ ကစားခဲ့ကြသလဲ ?
သောမတ်စ် မူလာ . . . . . ဘောလုံး ကမ္ဘာကြီးထဲက Underrated အဖြစ်ဆုံး ဘောလုံးစတား
သောမတ်စ် မူလာ ကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို မြင်ကြလဲ . . . သူက တိုက်စစ်မှူး လား ၊ ကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင် လား ၊ ဂိုးသွင်းစက်လား ၊ ဘောလုံး ဉာဏ်ကြီးရှင်လား ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူ့ကို စွယ်စုံရတဲ့ ရှေ့တန်းလူ ( Versatile Attacker …
ရှေ့တိုးပေးလိုက်တဲ့ အာဆင်နယ် – လီဗာပူး ပွဲစဉ် နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
#Breaking_News: UEFA အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ဆန်ကာတင် စာရင်း ထွက်ပေါ်
နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ၊ အေတီကို ပြောင်းခွင့်ရတဲ့ ဆွာရက် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
၃ မှတ် ပေးလိုက်ရတဲ့ ရိုးမား ၊ နောက်ထပ် လူခေါ်ဦးမယ့် လီဗာပူး တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့ည က ကစားသွားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ် မှာ ဘန်စလေ အသင်း ကို သက်တောင့်သက်သာ ကစားရင်း ၊ ကိုင်ဟာဗက်ဇ် ရဲ့ ဟက်ထရစ် ၊ တမ်မီ အေဘရာဟမ် ၊ ရော့စ် ဘာကလေ ၊ လူစားဝင် တိုက်စစ်မှူး …